Asain’i Masindahy Paoly Apôstôly isika mba hahay hisaotra an’Andriamanitra noho ny nanomezany antsika ireo olona tia antsika sy malala-tànana tokoa amintsika. Manana adidy isika ny hirary ny soa sy ny tsara ary fahasambarana ho azy ireny. Izany tokoa mantsy no nataon’i Masindahy Paoly Apôstôly an’ireo kristianina tany Filipy. Mirary azy ireo mba hitombo hatrany ao anatin’ny fitiavana izy ; iriny mba hiroso hatrany amin’ny fahamatoram-pahamasinana izy ireo.
Mampianatra antsika ihany koa i Jesoa Kristy ao amin’ny Evanjely anio, mba hikatsaka amin-kasahiana ny sitrapon’Andriamanitra sy ny vinavinam-pamonjeny ho antsika. Amin’alalan’ny famonjena ireo sahirana manodidina antsika, eny fa na dia amin’ny andro sabata aza izany, no anatanterahantsika izany sitrapon’Andriamanitra izany.